Gudoomiyaha Marka Oo Baaq Deg Deg Ah Kasoo Saaray Amaanka Magaalada + Dhageyso – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Dagaalo soo noq noqday oo u dhaxeeya ciidamada dowlada federaalka Somaaliya iyo kuwa Xoogaga Al Shabaab kana dhacayey sanadihii dambe degmada Marka ee gobolka shabelaha hoose ayaa Sababay inay barakac sameeyaan dadkii reyid ka ahaa ee ku noolaa Magaalada Marka.
Barakacayaasha kasoo cararay dhibaatada iyo dagaalada ka jira degmada Marka ayaa ku barakay qeybo kamid ah gobolka shabelaha hoose iyo duleedka magaalada muqdisho oo ay haatan ku nool yihiin barakacayaal aad u fara badan.
Degmada marka waxaa haatan gacanta ku haya ciidamada 14-oct oo hoostaga dowladda federalka Somaaliya waxaana dhawaan booqasho aan hore loo sii shaacin oo uu habeen kuso seexday ku tagay madaxweynaha J F S maxamed Farmaajo.
Gudoomiyaha Degmada Marka Cumar Xasan Macalin oo La hadlay Idaacada Simba ayaa ugu baaqay shacabkii hore uga barakacay degmada marka inay dib ugu soo laabtaan guryahooda maadaama la isku haleyn karo amniga degmada oo ay gacanta ku heyso dowladda Somaaliya.
Dhageyso Codka: Gudoomiyaha Degmada Marka.